musha FOOTBALL MANAGER Chris Wilder Nyaya dzeChikoro Chemwana Plus Untold Biography Chokwadi
LB inopa Nyaya Yakazara yeBhola Genius nezita rezita "Iye Mukuru Wechikoro Chekare". Yedu Chris Wilder Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yezvinoitika zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hupenyu nekumuka kwaChris Wilder. Image Credits: LastSticker uye Twitter.
Kuongorora kwacho kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga / hwemhuri, dzidzo / basa rekuvaka, hupenyu hwebasa repakutanga, iyo nzira yeku mukurumbira, kusimuka kune mukurumbira nyaya, hupenyu hwehukama, hupenyu hwega, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvinhu zvidiki-zvinozivikanwa pamusoro pake.
Ehe, munhu wese anoziva kuti iye maneja ane anonzi "Dinosaur'nzira yekutarisira bhora, iye akaita zvishamiso nekugadzira Sheffield timu yake (kudhura zvakaderera kupfuura £ 1m) tanga zvakanaka kusvika kune 2019 / 2020 premier ligi mwaka. Nekudaro, vashoma chete vevateveri venhabvu vanofunga shanduro yedu yeChris Wilder's Biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino pasina imwezvezve ado, ngatitangei.
Chris Wilder Nyaya Dzevechidiki Nyaya Diki Untold Biography Chokwadi - Nhoroondo Yemhuri uye Hupenyu hwepakutanga
Christopher John Wilder akaberekwa pazuva re23rd raSeptember 1967 muStockbridge, guta diki uye paruzhinji rwevanhu riri muGuta reSheffield, England. Kunyangwe akaberekerwa muSheffield, maneja wenhabvu weWhite Briteni wedzinza ane mhuri yake kubva kuguta reSimbi reLiverpool, zvichireva kuti iye 'Scouser'.
Wilder akakurira padivi pevabereki vake, vanun'una vake uye kunyanya kukosha, babamunini vake avo vaive nehunyanzvi hwekurera kwake. Anobva kumhuri yepakati-yemhuri inoshandirwa nababa vake avo vaiwana pekugara munzvimbo inoshanda-yeLiverpool. Semukomana mudiki, babamunini vaWilder vaive nechimiro chikuru paari kufarira mutambo. Seti yake yemarume haana kungomudzidzisa kutamba bhora, asiwo vakaenda naye kuAnfield kunoona Liverpool mitambo. Mumashoko ake;
“Isu taimboenda kuKisimusi uye nezororo rechikoro risinganzwisisike. Ndipo pandakanga ndichienda kuAnfield pamwe nababamunini vangu vaigara muhupfumi suburb, kumabvazuva kweLiverpool. Ini ndaizovatarisa kusanganisira baba vangu vachitamba bhora ”
Chris Wilder Nyaya Dzevechidiki Nyaya Diki Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Mukati memakore makumi manomwe, Liverpool yakawana huwandu hwakawanda hwebudiriro, kuhwina zvese- iyo European Cup, UEFA Champions League, League Cup, European Super Cup / UEFA Super Cup etc. Chris Wilder aive kuAnfield kundofudza dzimwe nguva idzodzo nababa vake nababamunini, kukura uko kwakamuona asingadi chimwe chinhu kunze kwekuve mutambi wenhabvu.
Ndiri kuchikoro, Wilder ainakidzwa nemitambo yese, kunyanya kiriketi. Pasinei nokuva mutambi-wenhabvu, mutambi wenhabvu akaramba achiripo. Kuti atsvaire zviroto zvake. Chris Wilder akasiya Liverpool kuenda kwaakaberekera Sheffield kunotsvaga mikana yebhola. Akawana basa sebhora rekwaStockidge Park Steels FC iri mudunhu reShersbridge kuenda kuSheffield.
Gare gare, Wilder akawana muedzo wakabudirira neSouthampton semudzidzi wenhabvu uye mutambi wezvemitambo. Semunhu aizvininipisa wekudzidza, akatora iro basa rekuchenesa nhabvu ebhora yeSouthampton legend- David Armstrong. Kunyangwe achipa zvakanakisa, murombo weWilder aisakwanisa kufambira mberi kuburikidza neboka revadiki vechikwata kuenda kune akuru nhabvu. Zvinosuruvarisa, akaburitswa nekuda kwekusaita zvakanaka pasina kuzviita muchikwata chekutanga cheSouthampton.
Chris Wilder Nyaya Dzevechidiki Nyaya Diki Untold Biography Chokwadi - Basa Rebhola muPfupiso
Chero wechidiki mudiki akararama kuburikidza kuramba chikoro achaziva chete zvakanyanyisa kurwadziwa kwepamoyo uye kukuvadza maitiro epfungwa aungave nawo. Mushure mekutadza kugadzira giredhi iri seSouthampton academy player, murombo Wilder akadzokera kuSheffield, guta rake rekuzvarwa. Nekutenda, Sheffield United yakamugamuchira iye semuchengetedzi.
Kunyangwe kuve mutambi wepakati, Sheffield akabatsira Wilder kuti aite basa rake repamusoro. Iye aimbove mukomana webhora pasina nguva akazvipikisa pachikwata chekutanga chechikwata munaAugust 1986. Munguva yebasa rake naSheffield, Wilder akazvininipisa nekuenda nechikwereti aine akazara makirabhu e11 asati abatana neHalifax Town mu1999, iyo kirabhu iyo yakasungirirwa pakupedzisira mabhutsu ake. Wilder (akafananidzirwa pazasi) akarega bhora kubva pazera re34.
Chris Wilder akarega basa kubva kunhabvu ane makore 34. Image Chikwereti: BT
Chris Wilder Nyaya Dzevechidiki Nyaya Diki Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Chris Wilder paakasiya basa akatanga kupinda mukutungamira kwenhabvu nekutenda kuti angaite zvirinani kunyangwe ave mutambi wenhabvu wenhabvu. Akatanga basa rake rekudzidzisa neAlfreton Town mugore re2001. Nhabvu manejimendi sezvaaifungidzira akatanga pane yakanaka pfungwa. Waizviziva here? Mumavhiki chete e27 mushure mekutonga kwaAlfreton, murume wechirungu akahwina mikombe ina.
Kutora chinhanho chinotevera mubasa rake rekutungamira, Wilder akaenderera mberi nekugadzirisa Halifax kwemitambo inopfuura ye300 kusvika iyo kirabhu yakaenda mukunyorwa kwe 30 June 2008. Kuiswa kwemvura kwakatungamira kuenda kuOxford uye gare gare, Chikwata Chechipiri chakakwikwidza Northampton, kwaakavatungamira kune League Two zita rine 99 mapoinzi.
Waizviziva here? Chris Wilder achiri kuNorthampton asina kubhadharwa kwemwedzi mitatu, kusimudzira kwakatungamira kuchiitiko chinosuwisa chekuti kadhi rake rakaderedzwa zvisina tsarukano pazvitoro zvepamarket Checkouts. Murombo Iye !!!
Chris Wilder akabhadharwa kadhi rake paakakweretwa mwedzi mitatu yemubhadharo. Image Chikwereti: owls kutaura uye nekukurumidza kubhadhara
Chris Wilder Nyaya Dzevechidiki Nyaya Diki Untold Biography Chokwadi - Simuka Mukurumbira
Hupenyu hwaChris Wilder muziso redutu remari rwakanunurwa naSaudi Arabian Prince Abdullah, muridzi weSheffield uyo akamukoka kuti atore maneja nekirabhu. Pa 12 mai 2016, Wilder akabatana nekwaairi mukomana kirabhu Sheffield United.
Nekutsigirwa kushoma kwemari, Wilder akaita zvakawanda zvaakawana kuburikidza nekushambadzira kwemahara. Akagadzira donzo rake rekutanga kuve; “Kuita kuti vatambi vanzwe vari kumba”. Achiedza kuti izvi zviitike, maneja asina umwari akabvisa zvinyorwa zve "Tikugashirei Kubasa"Pamakirabhu ekudzidziswa basa. Kwaari, pakanga paine zvirinani kukurudzira matsimba uye vatambi vaiitirwa kunzwa vari kumba.
Chris Wilder pakubatana naSheffield akabvarura masirogani ekukurudzira achizadza nzvimbo yekudzidzira. Image Chikwereti: SuFc uye Twitter
Kunyangwe kutanga kwakashata kwekutanga mwaka, Wilder akatungamira kirabhu yacho kuva League One Champions inochengetedza 100 mapoinzi ari kuita (rekodhi yemakirabhu. Kubudirira kwake kwakapfuurira mushure mekuwana kupinda muChikwata cheMakwikwi. Mumakwikwi, Wilder akatungamira Sheffield United yake padanho rekukunda kukurudzira kwake kwechipiri mumakore matatu chete kuchikwata ichi.
Mukuziva zvaakakwanisa kuita, akapiwa maneja weLMA we2018 / 2019 mwaka. Wilder akakundwa Pep Guardiola kune mubairo kunyangwe maneja weManchester City akapedza treble yemumba.
Chris Wilder akabata kune wake LMA Manager weGore- 2018-19 mubairo. Image Chikwereti: DailyMail
Mushure mekusvitsa kirabhu yake yekumusha kumutambo wepremier, Wilder akatanga kuvaka boka rake kutenderera John Lundstram, iyo imwe nguva iyo Everton inoramba uye nyanzvi yebhola kubva kuguta rake, Liverpool. Kupa akasara evatambi vake rusununguko rwekushandisa akaona munhu wese akakodzera zvakakwana mune maBlades 'jigsaw. Wilder's Sheffield United panguva yekunyora yakaratidza kuti nhabvu yenhabvu haina kunaka mushure mekudyiswa nevamwe vateveri se zvakanyanyisa kukosha kwePremier League.
Senge panguva yekunyora, maneja weChirungu kubva kuLiverpool ari kurumbidzwa semumwe wevatambi vePremier League vakambotangisa mushure Pep Guardiola- zvese zvekutenda kuBlades 'inotyisa kutanga kune 2019 / 2020 mwaka. Vamwe vese, sezvavanotaura, yave nhoroondo
Chris Wilder Nyaya Dzevechidiki Nyaya Diki Untold Biography Chokwadi - Ukama Hupenyu
Chris Wilder murume akaroora. Pakutanga aive akaroora mukadzi wake wepamoyo anonzi Rachel Wilder wevavo vaviri vaive nevanasikana vaviri vakanaka vanova; Martha Wilder naEvie Wilder. Kuunza vana apo murume wake akaenderera mberi nebhizinesi rake rekudzidzisa, Rachel Wilder akatarisira chitoro chechipfeko cheMapurisa muManchester neSheffield.
Maererano nemishumo, zvakafumurwa kuti aimbove mukadzi waChris Wilder (Rachel) haafarire nhabvu, dzimwe nguva kuwana simba nazvo zvinoonekwa kwemaawa akati wandei mumhuri yemhuri. Zvisinei, iye anongotarisa kana timu yemurume wake ichikunda. Pakati pevakunda vaChris Wilder, zvinongova chete Martha ndiani anoda zvemitambo. Evie Wilder ari mufashoni.
Mushure memakore mazhinji ewanano yemubereki wavo, vese vari vaviri Martha naEvie vakatanga kuona hukama huri kuderera pakati paamai vavo nababa. Zvinhu zvakatanga kudzikira uye zvikavava zvekuti a 'kurambana' yakaonekwa senge yakanakira sarudzo yevaviri vakura.
Chris Wilder akaenderera mberi mushure mekurambana. Mushure mechinguva, akasangana nemukadzi anonzi Francesca uyo waakatsanangura musangano wavo se''Vanoda.rudo 'pakutanga kuona'. Vose Chris naFrancesca vakaroora mune zuva rekupedzisira zuva re2017 (31st yaJanuary 2017). Izuva rakadii kuti maneja wenhabvu akwanise kuroora !!
Chris Wilder Nyaya Dzevechidiki Nyaya Diki Untold Biography Chokwadi - Upenyu hwehupenyu
Kuziva iwe pachako hupenyu hwaChris Wilder kwaizokubatsira iwe kuti uwane zvakakwana mufananidzo wehunhu hwake kure nemabasa ake pane pebhora renhabvu.
Kutanga kuenda, Wilder murume akatendeseka uyo anoshandisa nyanzvi uye inonakidza-kugumisa nzira yekuchengeta vanhu pasi pekutarisirwa kwake kwakavakirwa. Iye anotenda zvikuru murusununguko uye aisazozvitora zvingangoita kana kusareruka kwake kuchinge kwakarerutswa. Semuenzaniso, kana iwe ukaita chimwe chinhu chinomufadza, angafara kukuudza kuti anofara. Kana iwe ukaita chimwe chinhu chisingamufadze, anokurumidza kukuzivisa iwe, dzimwe nguva achiuya pamusoro pako senge toni yezvidhina. Achitaura nezvehunhu hwake nezve kusashivirira usimbe, akambotaura kuti 'Vamiriri ndevekudya kwete vevatambi vanotadza kuziva matarenda avo '.
Kuda Kwake Doro & Waini: Achitaura nezvehupenyu hwake kubva padanho rezvemagariro, Chris Wilder anotsanangurwa nevazhinji semumwe munhu anogara achiwadzana (kunyanya) neshamwari dzekare dzekubhawa uko kwaanoonekwa nguva zhinji achitsvaga hwahwa hwaanofarira.
Kusvika pakuziva Chris Wilder Hupenyu hweMunhu kure neBhora. Mifananidzo Credits: izsearch, EveningStandards uye BT
Waizviziva here? A mashoma emabhuru newaini neyeanodzidzisa vashandi pamwe neyevatambi vekare anogara achidzika pasi zvakanaka mushure mekukunda kukuru.
Chris Wilder Nyaya Dzevechidiki Nyaya Diki Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri
Mhuri yaChris Wilder panguva yekunyora inogara kuEplesall Road, nzira iri kuSheffield, South Yorkshire, England. Panguva yekunyora, ave nechokwadi chekuti nhengo dzemhuri dzese dzinoedza nepavanogona napo kuti vasatsvaga kuzivikanwa neruzhinji.
Nekuda kwehukama hwemhuri, mhuri yake yese yakawedzera kunakidzwa apo bhora rinomuendesa kuMerseyside kutamba kunotamba neLiverpool kana Everton. Izvi zvinodaro nekuti sheffield United mukuru wavo aishandisa nguva idzodzo kubatana nemhuri yake muLiverpool. Kunyangwe hazvo timu yake ichitamba chero yeOverton kana yeLiverpool, Wilder anozviwana achitenga matiketi emitambo yevamwe vevanopikisa vaanotsanangura seMhuri. Nekudaro, kutamba vachipesana nedivi remhuri yake zvakadzama munhu nekuti baba vake vanobva kuLiverpool uye vazhinji vemhuri yemhuri vanogona kunge vari Liverpool kana vateveri veFeverton.
Kune rimwe divi, Sheffield mafeni achiri kungoti Wilder kuti ive yavo nekuti akakurira muguta ravo. Waizviziva here? Sango rinowanzo dhonzwa nemakanda e 'Iye ndewedu'pamudiwa wake Bramall Lane. Izvi zvinodaro nekuti Sheffield mafans vanomuda uye vanotenda iyewo mhuri.
Chris Wilder Nyaya Dzevechidiki Nyaya Diki Untold Biography Chokwadi - Lifestyle
Chris Wilder anogara hupenyu hwekuzvininipisa kunyangwe achigamuchira muhoro wakanaka semaneja. Panzvimbo pekushandisa mota dzinopenga dzaigona kutengwa nemubairo wake, aitoenda hake kuSheffield nechitima cheruzhinji zvaifarira mabhasi.
Maererano nemishumo, Wilder achiri dzimwe nguva anoshandisa muchengeti weBestles Road mubhazi pedyo nemusha wake, chiratidzo chinoratidza pasi rake zvisikwa. Iye, pasina kupokana, mushonga wekurarama wakadhura.
Chris Wilder Nyaya Dzevechidiki Nyaya Diki Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
Aimbove Mudzidzi kuna Sir Alex Ferguson: Waizviziva here? Chris Wilder pamazuva ake ekutanga ehutariri aive mudzidzi wengano weaimbove mukuru weManchester United Sir Alex Ferguson.
Chris Wilder naAlex Ferguson- Mudzidzisi wake. Mufananidzo Chikwereti: SUFC
Munguva yake kuAlfreton Town uye Oxford, Wilder kazhinji aizoenda kuManchester kunoona iye Legendary maneja ezvekudzidzisa zvidzidzo. Achitaura nezve chiitiko ichi, akambotaura mumashoko ake achiti;
"Akatora nguva kuti andibatsire munzira." Aimbozviita kune vechidiki vashoma veBritain mamaneja, kwete ini chete. Stuff yakadaro yakandipa kukurudzira kukuru.
Akambofonera husiku husati hwapfuura ini ndakasimudzira mutambo wekupedzisira kutamba neOxford [takatarisana neY York mu2010] uye akapfuura matipi akati wandei akandibatsira kuti ndikunde. ”
Chitendero: Chris Zvakashata senge dzakawanda dzeLiverpool mhuri dzinofungidzirwa kuti dzakabva kumhuri yemhuri. Nekudaro, pane zvishoma kana kuti hapana zviratidzo zvehukama hwake.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Chris Wilder Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusasarura. Kana iwe ukawana chimwe chinhu chisingaratidzika sezvakanaka, tapota tigovera icho isu nekupindura pazasi. Isu tichagara tichikoshesa uye nekuremekedza mazano ako.
Sheffield United Nhabvu Diary
Erling Braut Haaland Kukura Kwemwana Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Ainsley Maitland-Niles Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Rob Kubata Ucheche Nyaya Inosanganisira Untold Biography Facts
Harry Maguire Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Rio Ferdinand Childhood Nhoroondo Plus Untold Biography Facts
Andy Cole Urubhabhatidzo Nhau Plus Untold Biography Facts